Darpan Nepal – पति-पत्नीबीच खटपट भइरहन्छ ? यसरी सल्टाउनुस्
पति-पत्नीबीच खटपट भइरहन्छ ? यसरी सल्टाउनुस्
– शंका र अविश्वासले दम्पतीबीच फाटो ल्याउाछ । त्यसैले पहिले त शंका, उपशंका, अविश्वासको वातावरण बन्न नै नदिने । यदि त्यसो भइहाले पनि, दुबै
स्पष्ट हुनुपर्छ । दम्पतीबीच कुनैपनि कुरा लुक्नु हुादैन ।
– एकअर्काको ख्याल राखौं । पतिले पत्नीको र पत्नीले पतिको ख्याल राखौं । दुबैको पिर मर्का साझेदार गरौं । पारिवारिक दायित्व पतिलाई मात्र सुम्पने वा
घरधन्दाको काममा पत्नीको मात्र भर पर्ने प्रवृत्ति त्यागौं ।
Previous Postयौनसम्पर्कका लागि उत्तेजित हुन प्रायः महिलालाई कति मिनेट लाग्छ? जानी राखौं Next Postदुवै खुट्टा गुमाएका बुढामगर यसवर्ष सगरमाथा नचढ्ने